Tsy mandeha ny plugin Google AMP? - Ity ny vahaolana avy amin'ny amp-cloud.de - MG
Tsy mandeha ny plugin Google AMP? -
Fanampiana sy vahaolana
Mampiasa ny iray amin'ireo plugins Google AMP ve ianao, ny mari-pamantarana AMPHTML na ny mpamorona AMPHTML hamoronana Takelaka finday haingana (AMP) ho an'ny tranonkalanao, saingy tsy mandeha tsara ny pejy AMP? - Eto ianao no hahita vahaolana sy fanazavana momba ny fomba hahazoanao kinova AMP marina miaraka amin'ny fanampian'ny amp-cloud.de!
Ny antony mahazatra indrindra
Ny antony mahazatra indrindra mahatonga ny famoronana ny pejy AMP dia ny tsy fisian'ny tag Schema.org. Ny Accelerated Mobile Pages Generator dia mifototra indrindra amin'ny schema.org tags / Micordata tags , fantatra ihany koa amin'ny hoe "data structured" .
Ny lahatsoratry ny bilaoginao na ny lahatsoratra navoaranao dia tokony hisy marika schema mendrika arakaraka ny iray amin'ireto rakitra schema.org ireto mba hahafahan'ny plug-in AMP ary koa ny tag AMPHTML manamarina ny pejyo tsara ary mamaky ireo firaketana angon-drakitra ilaina:
Tsy tianao ny pejy AMP?
Raha toa ny pejy AMP anao namboarina tamin'ny alàlan'ny plugin AMP na ny tagan'ny AMPHTML tsy hita, ohatra ny lahatsoratra, na ny singa sasany dia tsy aseho tsara eo amin'ny pejy AMP, matetika izany dia vokatry ny schema.org tsy misy apetraka tsara na tsy misy Marka an'ny faritra data sasany ao amin'ny pejy voalohany.
Raha misy hadisoana toy izany: Ampifanaraho amin'ny tranokalan'ny AMP
Araho fotsiny ireo tolo-kevitra etsy ambany hanatsarana ny tranonkalanao ho an'ny mpamorona AMPHTML sy ny plugins Google AMP mba hahafahan'ny famoronana pejy AMP anao hiasa tsara kokoa mifanaraka amin'ny hevitrao.
Amboary ny lesoka amin'ny seho AMP:
Ny mari-pahaizana Schema.org dia apetraka matetika amin'ny fomba izay, ohatra, tsy ny lahatsoratra lahatsoratra madio ihany no voahidy, fa koa ny singa toy ny fizarana anjara na ny asan'ny fanehoan-kevitra, sns. tsy mety.
Azonao atao ny manamboatra azy io amin'ny alàlan'ny fametrahana tsaratsara kokoa ny mari-pamantarana Schema.org META amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo singa izay tena ao anaty lahatsoratra. Noho izany, alao antoka fa hampiasa ireo angon-drakitra micro araka ny antontan-taratasin'izy ireo tsirairay avy mba hahafahan'ny plug-in AMP sy ny tag AMPHTML mandika tsara ny data momba ny tranonkalanao mba hialana amin'ny lesoka amin'ny fisehoan'ny pejy AMP.
Tsy misy soratra ny pejy AMP?
Amin'ny tranga sasany dia mety tsy misy lahatsoratra mihitsy ny pejy AMP anao. Ny antony matetika mahatonga an'io dia ny marika Schema.org tsy hita "articleBody" na ny tsy fampiasana tsy mety ny tag an'ny articleBody.
Mba hiasa tsara ny plugin AMP sy ny tag misy AMPHTML ary afaka mahita ny lahatsoratry ny lahatsoratrao, ataovy izay hampiasainao tsara ny Mirco-Data-Tags araka ny iray amin'ireo rakitra Schema.org voalaza etsy ambony ary indrindra ho an'ireo lahatsoratra lahatsoratra mampiasa " articleBody " tag.
Fanamarihana tag schema
Miaraka amin'ireto fitaovana fanandramana schema manaraka ireto dia azonao atao ny manamarina raha nampifandray tsara ireo mari-pahaizana schema ianao mba hahafahan'ny rakitra an-tsoratra manan-danja aminao dia vakiana madio sy marina.
Ny mpanamarin-tsorika schema dia manamarina raha voamarika tsara ny bilaoginao na ny lahatsoratra navoakanao ary misy angona angon-drakitra mety mba hiasa tsara ny plugin AMP sy ny tag AMPHTML:
Fitaovana fanandramana angona Google Structured
Pejy AMP tsy misy angona voarindra
Manamarina ny pejy AMP tsy misy angona voarindra? - Raha tsy misy mari-pamantarana schema ny lahatsoratry ny vaovaom-baovao na ny bilaoginao dia mampiasa tag HTML isan-karazany ao amin'ny kaody loharano ao amin'ny pejin'ny lahatsoratrao ny mpamorona AMPHTML mba hamoronana ho azy ny pejy AMP mety sy azo hamarinina indrindra amin'ny lahatsoratrao.